विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०१९ः ‘४० सेकेन्डको कार्य’ आत्महत्या रोकथामका लागि जागरुकता जगाउन ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह « Nepal Health News
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०१९ः ‘४० सेकेन्डको कार्य’ आत्महत्या रोकथामका लागि जागरुकता जगाउन ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक ४० सेकेन्डमा १ जनाले आत्महत्या गर्ने
२०७६, २३ आश्विन बिहीबार ०९:२८ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, २३ असोज २०७६ । आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हो । यो दिवस हरेक वर्षको अक्टुवर १० तारेखमा मनाउने गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संघलगायत विश्वव्यापी मानसिक स्वास्थ्य संस्थाको पहलमा सन् १९९२ देखि विश्वव्यापी रुपमा नेपाल लगायत १ सय ५० भन्दा बढी मुलुकमा मनाउने गरिएको छ । यो दिवस विश्व मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, जागरुकता र सामाजिक कलंकविरुद्ध वकालत गर्ने दिन हो ।
सन् २०१९ मा ‘आत्महत्या रोकथामका लागि सहकार्य’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक ४० सेकेन्डमा १ जनाले आत्महत्या गर्ने गर्छन् । त्यसैले सन् २०१९ मा ‘४० सेकेन्डको कार्य’ आत्महत्या रोकथामका लागि जागरुकता जगाउन ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
मानसिक रोगमध्ये धेरैलाई हुने डिप्रेसन र एन्जाइटी हो । डिप्रेसन भनेको दिक्क लाग्ने र एन्जाइटी भनेको मन डराउने हो । नेपालमा ९ लाख डिप्रेसन, ९ लाख एन्जाइटी र १ लाख कडा मानसिक समस्या भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । यसका साथै अल्कोहल र गाँजा खाने समस्या, निद्रा नलाग्ने समस्या, टाउको दुख्ने, वाइपोलार डिसअर्डर, सेक्सुअल समस्यालगायतका धेरै समस्या छ । विश्वमा हरेक ४० सेकेन्डमा एक जनाले आत्महत्या गर्ने संगठनको तथ्याक छ । भारतमा हरेक दुई मिनेटमा एक जनाले आत्महत्या गर्छन् । यसको मुख्य कारण डिप्रेसन मानिएको छ ।
(यो समाचार वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ त्रि. शिक्षण अस्पतालका मनोरोग विभागका प्रमुख प्रा.डा. सरोजकुमार वझासँगको कुराकानीमा आधारित छ ।)